दृष्टि अनेक, नियत अनेक घटना राष्ट्रवादीले गराउँछ या देशभक्तले ?
- सत्यम राई 'चाैरासे' र लाखमन ग्रहनदन
हामी वीर छौँ,
तर हामी बुद्धु छौँ ।
हामी बुद्धु छौँ,
र त हामी वीर छौँ ।
कवि भूपि शेरचनका यी पंक्ति आज कहाँ-कहाँ असान्दर्भिकझैँ लाग्न थालेको छ । हुन त वर्तमानकाे याे समयले रूपरङ फेरि नै रहन्छ, घटना अनेक हुने गर्दछन्, दृष्टि सबैको आफ्नै, नियत सबैको बेग्लै । आफ्नो दृस्तान्त प्रस्तुत गर्ने क्रममा एउटा घटना सम्झन्छु- बीभत्स घटना ।
मेची नदीको किनारमा बसोबास गर्ने हामी तथाकथित् राष्ट्रवादी नागरिक जुरमुराएका थियौँ । अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना र सम्बन्धको विषयमा तातिएको थियोे बहस । 'मेची नदीको उद्गम थलो' शीर्षकको विषयलाई लिएर स्थानीयबीच (पश्चिममाहरूले Citizen Scientist पनि भन्दा रहेछन) चर्को बहसको अन्त्य मेची नदीको स्थलगत अध्यनसँगै इतिहासमा भएको सन्धिसम्झौताको अध्ययन गर्ने निष्कर्षले गर्‍याे ।
अध्ययन गर्दै जाँदा सीमासम्बन्धी प्राप्त पुस्तकमा मेची नदीको उद्गम थलो लालीखर्क हो भन्ने पाइयो, जुन ठाउँ इलाम जिल्लामा पर्छ । यसले अनुसन्धानमा खटिएका हामीलाई झनै अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना गर्‍याे । मेचीको सान्द्दमा बग्ने सिद्धि नदीको शिर लालीखर्क हो भनी अग्रज स्थानीय बुद्धिजीवीबाट सुन्दै आएका हामीलाई यस तथ्यले झनै असामञ्जस्यमा पार्‍याे । सीमा बचाउने जोश जागेका हामीलाई अथवा भनौँ राष्ट्रियताको भोक हामीमा जो थियो, यो समस्यालाई छर्लङ्ग पार्ने अठोटका साथ स्थलगत अध्ययनमा जाने निर्णयमा पुग्यौँ ।
मेची नदी किनारमा हिँड्दै छौँ, ऊर्जाका साथ खोज्दै छौँ, जङ्गे पिलर जसले हामी भिन्न देशको मानव हौँ भन्ने महसुस गराउँछ । गाउँका अग्रज वृद्धहरूको झिसमिसे सम्झनाको भरमा चौपायाहरू पाखो भित्तामा चराएको कथाको सन्दर्भ सामग्रीको सहयोगमा हामी सिमाना अनुसन्धान गर्दै छौँ । देशको अन्तिम बिन्दु खोज्दै छौँ । जहाँ हाम्रो मृत शरीर पनि अनागरिक हुने गर्दछ ।
हिँड्दाहिँड्दै पारिपट्टिको हरियो भारतीय पहाड देखिन्छ, त्यहाँ बनेको अजङ्गको आधुनिक विद्युतीय पोलहरूले हामीलाई गिज्याउँछ । तर, ती आधुनिक पोलहरूप्रति हामीलाई घृणा जागेर आउँछ मालिकको गन्ध मिसिएको भान हुन्छ । भारतीय राजनीतिज्ञ डा. शशि थरुर राष्ट्रवादी र देशभक्तबीचको फरक छुट्याउँदै भन्छन्, 'जसले आफ्नो देशको माया गर्छ, ऊ देशभक्त हो, जो आफ्नो देशका निम्ति अरु देशलाई घृणा गर्छ, ऊ राष्ट्रवादी हो ।'
थरुर अझै थप्छन्, 'आफ्नो देशका निम्ति मर्न तयार हुने देशभक्त हो । आफ्नो देशका लागि मार्न तयार हुने राष्ट्रवादी हुन् । यस्तो हो भने हामीले कित्ता क्लियर गर्ने समय आएको हो । केही दिनको अध्ययनपश्चात् कुनै ठोस निचोड नआएपछि वैज्ञानिक अध्ययन सीमा विवरण राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नक्साहरू त्यस भूभागमा बस्ने नागरिकको संस्कार, संस्कृति, भाषिक ऐतिहासिक अभिलेखहरू राज्यलेे शैक्षिक पाठ्यक्रममा समावेश गर्न पहल गर्ने निष्कर्ष केही समयलाई थाँती राख्यौँ ।
विश्रामपछिका केही दिनमा सीमासम्बन्धी छलफल गर्दैगर्दा अनौठो समाचार सुनियो, संसद् विघटनसँगै धेरै विचार मुर्च्छित भएछन् । देश भयानक मनोरोगमा फसेको महसुस भयो । दृष्टि अनेक, नियत अनेक घटना राष्ट्रवादीले गराउँछ या देशभक्तले ? सीमा अध्ययनको विशाल मुद्दामा हिँडेका हामी अनभिज्ञ हुन्छौँ, मानौँ हामी ग्रिक मिथकको पात्र कोरियेन्थका राजा सिसिफस हौँ, जसको काम अजङ्गको ढुंगा पहाडको टुप्पोमा पुर्‍याउनु हो । मात्र त्यो ढुंगा फेरि जमिनमा खस्नेछ । हामी जीवनभर त्यही ढुङ्गा पहाडको शिरमाा पुर्‍याउने अनि खसेको हेर्ने अत्यासलग्दो चक्रको पात्र हौँ । जसको कुनै अर्थ छैन र स्वार्थ पनि छैन ।
घटना आफैँ हुन्छन् या कसैले गराउँछन् । विद्वान्‌हरू कुटिल हुन्छन् क्यार । अनेक शब्दजाल रच्छन्, वुय्हरचना बनाउँछन् । लाग्छ- समाधि उनीहरूलाई त्यही हो । सत्यको सर्वाेत्तम व्याख्या गर्नु नै ऊनीहरूको ध्यय हो । कहिलेकाहीँ गान्धी र टल्सट्यबीच विश्वबन्धुत्वलाई लिएर लेखिएको चिट्ठीपत्र च्यात्न मन हुन्छ । राष्ट्रवाद एउटा भयानक संक्रामक रोग हो भन्ने आइन्सटाइनलाई एन्टारटिकामा आफ्नो गौरविलो राष्ट्रवाद झल्काउने यूके/अर्जेन्टिनाजस्ता देशहरूको अदालतमा उभ्याउन मन लाग्छ तर फगत सब बकवास । हामी भूपि शेरचनले भनेजस्तो बुद्धु पनि छैनाैँ, वीर पनि छैनाैँ । हाम्रा विद्वान् नेताहरू महाधुर्त छन् । त्यसैले त वीर राष्ट्रवादी छन् । अनि हामी ?
हाम्रो अस्तित्व छैन । हामी, हामी छैनौँ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, पुस २७, २०७७, १८:२६:००
सत्यम राई 'चाैरासे' र लाखमन ग्रहनदन